Thwebula Dolphin 5 – Vessoft
Le software idinga DirectX ukugijima kahle
Ikhasi elisemthethweni: Dolphin
Amazwana ku Dolphin
Dolphin software ehlobene
Emulators nemishini eyi-Virtual
Emulator free uhlelo lokusebenza Android. Isofthiwe kuqinisekisa ukudlala eliphezulu izicelo Android ne-software.
Emulator of Sony PlayStation udlala console. Isofthiwe kuqinisekisa kudlalwa akwazi of nezithombe zabo besebenzisa anezele ehlukahlukene.
Ithuluzi ukugijima izicelo Android nemidlalo. Futhi kusekela thwebula okuqukethwe ehlukahlukene kusukela amasevisi free.
Ukurekhoda kwesikrini, Ama-skrini
Isofthiwe ithumba ividiyo kusuka screen sakho bese ubheka FPS. Futhi isofthiwe kabanzi esetshenziswa gamers professional.
An omuhle video umhleli kunothile ehlunga ezahlukene kanye nemiphumela ukuqedela ukucutshungulwa video amafayela uwagcine ezidingekayo abezindaba takhiwo.
Isofthiwe nge isethi enkulu amathuluzi ukuphathwa okuphelele computer eyihlane ngokusebenzisa amanethiwekhi wendawo noma global.
Le software iklanyelwe ukuhlela amanani we-in-game njengenani lempilo, inani lamakhompi, imali noma amaphuzu. Isofthiwe isebenza kahle kuphela nemidlali eyodwa yomdlali.